Posted by Tranquillus | Apr 4, 2020 | Tababarka internetka
Skilleos: qeexitaanka fikradda
Skilleos waa mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan barashada barashada luuqada Faransiiska ee suuqa ku jirta. Boggu horeyba wuu u diiwaangaliyay waqtigan xaadirka ah oo aan ka yarayn fiidiyowyada 700 ee waxbarashada wuxuuna ku dhammaystirayaa dhinacyo kala duwan. Mashruucu wuxuu u adeegaa sidii goob lagu kalsoonaan karo oo u dhexeysa wax aan ka yarayn 300 oo macallimiin ah oo soo maray marxaladdii ugu adkayd ee imtixaankii iyo xuliddii, iyo in ka badan 80 oo arday oo horeba uga diiwaangashan goobta. Hadafyada Skilleos waa kuwo aad u fiican: inaad noqotid madasha tababarka ugu weyn adduunka ee adduunka.
Intaa waxaa sii dheer, bilowgu waa mid ka mid ah 30 shirkadood oo cusub oo ugu wanaagsan waaxda tikniyoolajiyadda cusub ee leh awoodda ugu badan ee koritaanka. Qiimeyntan waxaa sameeyay joornaalka weyn ee loo yaqaan "Entreprenendre" oo ku takhasusay ganacsiga.
Soo bandhigida madal Skilleos
Goobta tababbarka ee khadka tooska ah ee luuqada faransiiska waxaa la sameeyay 2015 waxaana sameeyay Cyril Seghers. Aragtida ku dhiirrigelisay aasaasaha bilowga abuuritaanka barta waa sida soo socota: in suuq loo keeno goob barasho oo ku takhasustay qaybta xiisaha iyo madadaalada. Tani waxay ka bilaabmatay indha indheyntii uu ka sameeyay maqnaanshaha guud ee boggan oo kale suuqa. Inta badan barnaamijyada koorsooyinka badan ee internetka ayaa diiradda saaraya xirfadaha barashada si uun farsamo ahaan iyo xirfad ahaanba.
Haddii aad rabto inaad lahaato koorsooyin masaafo ah oo ku saabsan su'aalaha la xiriira qaybta farsamada ama qeybta xirfadda sida sida loo xisaabiye xisaabiye ah, sida loo rakibo arji ... waxaa lagaa luminayaa inaad doorato hordhaca ah ee fiidiyaha fiidiyowyada aad adigu waa la bixin doonaa.
Laakiin waxaad lahaan doontaa waxyaabo aad u yar haddii aad raadineyso aqoon xagga firaaqada ah (dhaqanka yoga tusaale ahaan).
Maxaa ka dhigaya madal Skilleos mid gaar ah.
Marka la adeegsado madasha Skilleos, waxaad hadda fursad u leedahay inaad yeelato koorso dhammaystiran oo laxiriirta hiwaayadahaaga iyo nashaadaadka adiga ku siinaya farxad, si aad kor ugu qaaddo hamigaaga.
Si aad u ilaaliso oo aad u korto mar labaad iyo mar labaad harraad aad u gaarto barashada meelaha aad jeceshahay qalbigaaga, Skilleos wuxuu kaga duwan yahay tababarka dhaqanku ku saabsan yahay kuraasta fasalka. Si tan loo sameeyo, madalku kaliya kuuma siinayo fursad aad ku wax ku barato xawaarahaaga, doorashada xawaaraha (goobta, waqtiyada, bixinta koorsada, iwm.), Waxay sidoo kale kaa dhigaysaa inaad xiriir la leedahay macallimiinta, macallimiinta iyo khubaradu aad ayey u jecel yihiin waxa ay barayaan. Waxay kuu soo gudbin doonaan tamartooda buux dhaafaysa.
Skilleos waxay abuurtaa iskaashi tayo leh
Kaliya shirkadaha waaweyn, iskuulada meheradaha iyo jaamacadaha ee xukumaa waaxyadooda isla markaana ku raaxeysanaya muuqaal aan lala jaan qaadi karin shacabka, ayaa loo xushay inay ka shaqeeyaan iskaashi lala yeesho bilowga Skilleos. Waxaan ku tilmaami karnaa kuwa kale Orange, Smartbox, Nature & Discovery, Flunch.
Buug-koorso koorsooyin aad u kala duwan
Meelkasta oo aad xiisaynayso, waxaad ka heli doontaa koorsooyin dhammaystiran oo la xidhiidha Skilleos. Kala duwanaanshaha waxyaabaha ku jira waa qeexitaanka boggan. Takhasusku wuxuu u oggolaanayaa inuu ka soo baxo bogag kale oo badan oo e-waxbarasho ah kuwaas oo diiradda saaraya kaliya koorsooyinka maaddooyinka lagu dhigo jaamacadda ama xirfadaha farsamada. Barta 'Skilleos site' waxaa lagu daray intaas ka dib noocyada koorsooyinka fiidiyowga ah ee heesaha loogu talagalay waaxda firaaqada.
READ Soo bandhigida barnaamijka tababarka internetka iBellule
Madalku wuxuu iskugu daraa ganacsiga iyo raaxada iyadoo la isku daro noocyada koorsooyinka laga heli karo halkaas. Hada waxaad haysataa fursad aad kubarato, isbarato intaad madadaalo kusamaysanayso.
Maadooyinka waxaa lagu baray Skilleos
Skilleos waxaad ka helaysaa koorsooyin diiradda saaraya 12 maado oo kala duwan:
Fasallada farshaxanka & muusigga;
Koorsooyin qaab nololeed oo dhammaystiran;
Koorsooyin dhameystiran oo ku saabsan isboortiga & wanaag;
Koorsooyin waxbarid dhameystiran ah;
Koorsooyin dhameystiran oo ku saabsan horumarka shaqsiyeed;
Koorsooyin dhammaystiran oo ku saabsan barnaamijyada software-ka & internetka;
Koorsooyin buuxa oo ku saabsan nolosha xirfadeed;
Koorsooyin dhameystiran oo ku saabsan horumarinta shabakadda;
Koorsooyin buuxa oo la xiriira sawirka & muuqaalka;
Koorsooyin dhameystiran oo ku saabsan suuqgeynta websaydhka;
Koorsooyin luqadeed oo dhameystiran;
Koorsooyinka oo dhammaystiran oo ku saabsan sida loo maro koodhka wadooyinka;
Koorsooyin buuxa oo ku saabsan dhalinyarada.
Koorsooyinka ku saabsan dhalinyarada, Xeerka Wadada Wadooyinka, isboortiga iyo wanaagsanaanta ayaa hal abuur cusub u ah cilmiga elektaroonigga ah. Badanaa looma bixiyo sagootinta e-barashada.
Fiidiyowyo koorsooyin ah oo nuxurkooda lagu soo saaray mawduucyada dhalinyarada sida nafaqada ilmaha, ama aqoon qoto dheer oo ku saabsan Xeerka Wadooyinka, ma helno maalin kasta. Koorsooyin badan oo noocan ah ayaa ku jira barta.
Mawduuc gaar ah oo loogu talagalay dhalinyarada iyo carruurta.
Thanks to casharrada ku saabsan iyo carruurta soconaya 1 saac 30 daqiiqo oo loo abaabulay cutubyo kala duwan oo u dhexeeya tirada 20 ilaa 35, waalidiinta ayaa si fudud u la wareegi kara waxbarashada ilmaha socod baradka ah waxayna arki karaan horumar la taaban karo. ama qodobbo lagu hagaajinayo carruurta. Carruurta iyo waalidkoodba sidaas awgeed waxaa loogu baaqayaa inay qaataan koorsooyinkan. Tani waxay gacan ka geysaneysaa xoojinta xiriirka.
Qalabka Skilleos wuxuu carrabka ku adkeeyay barashada luqadda carruurta. Sababtoo ah waxaan si fiican u ognahay inay tahay da'da kooxdan in aan si sahlan ku baran karno luqad, tanina si weyn ayaan ugu mahadcelineynaa maskaxda carruurta oo si aad ah ugu habboon barashada noocaan ah.
Noocyada kale ee casharrada loo qoondeeyay dadka waaweyn, sida qaan-gaarka iyo dadka waaweyn, way ka duwan yihiin. Waxay sii dheeraadaan (5 h 23) waxaana loo qaybiyaa tiro badan oo cutubyo ah (94), oo loogu talagalay barasho dhammaystiran.
Skilleos waxay ku tiirsan tahay nuxurka asalka ah
Had iyo jeer ku dhiirrigeliya ardayda inay noqdaan hal abuur, si dibedda loogu muujiyo takhasuskooda iyo hantidooda, tani waa waxa goobta barashada e-waxbarasho ee Skilleos ay ku bixiso iyadoo la siinayo koorso kasta, nuxurka asalka ah, farxadna la yaab leh si ay u kiciyaan ardayda.
Aynu ku siino noocyo casharo ah oo asal ah:
Casharada Fanka iyo Muusikada : fiidiyowyo casharro ah oo ku saabsan aasaaska biyo-biyoodka.
Heesaha farsamada heesaha: waxaan ku baraynaa sida loo maareeyo neefsashada calooshaada
Sawirrada casharrada: waxaan ku baraynaa sida loo midabeeyo buugga majaajillada ah Photoshop si kor loogu qaado dhinaca farshaxankaaga.
Koorsooyinka horumarinta shaqsiyeed: runti asal ahaan asal ah oo aan badiyaa laga helin boggaga internetka ee koorsooyinka kale
Koorsooyinka luuqadda: waxaad fursad u leedahay inaad barato afka iyo hadalka.
Koorsooyinka maadada Isboortiga & Fayo-qabka: halkan sidoo kale, tusmada ayaa aad u kala duwan. Waxaad ka heli kartaa maadooyin cusub oo la yaab leh sida Yoga dhalmada ka horeeya, daawada dhirta, Soonka…
Fasallada qaab-nololeedka: tani waa nooca fasalka oo ka kooban waxyaabaha ugu lama filaanka ah ee asalka ah (abaabulka aroosyada, dubista, qurxinta qolkaaga, qaabka dharka… waxaad heli doontaa waxyaabo kugu dhiirrigeliya.
READ Samee Dareenkaada Ganacsiga leh Tababbarka Cadaaladda Video
Skilleos waxay mas'uul ka tahay soo xulashada iyo kala soocida astaamaha macallimiinta iyo khabiirada bixiya koorsooyinka madal. Tani waa si loogu soo bandhigo waxyaabo tayo sare leh oo loogu talagalay ardayda diiradda saareysa ficil iyo tallaabo qaadista kadib barashada.
Hawsha diiwaangelinta ee Skilleos?
Hawsha isdiiwaangalinta way ku kala duwanaan doontaa arday barta iyo kan kale.Hadii aad tahay bilaawe ama aad maaddo heer sare ah maado, habka diiwaangelintu wali waa isku mid. Adiga ayaa ah midka dooranaya meesha aad taagan tahay. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay isla koorsooyinka isla diwaan galintu waa bilaash. Si aad isu diiwaangeliso, waxaad leedahay ikhtiyaarka u dhexeeya sameynta boggaaga Facebook ama qaab aad ku buuxiso [magaca, magaca hore, emaylka, sirta ah iyo aqbalaadda shuruudaha guud ee isticmaalka iyo siyaasada gaarka ah ].
Sida loo dalbado casharada
Ka dib markaad iska diiwaangeliso barnaamijka Skilleos, waxaad kala dooran kartaa inta udhaxeysa rukunka ama inaad u bixiso koorsooyinka shaqsi ahaan iyadoo loo eegayo qiimaha koorso kasta. Labada ikhtiyaar waxay ku siinayaan inaad marin u hesho waxyaabahaaga 24/24.
Si aad u dalbato ka dib markaad doorato koorsada aad rabto inaad barato, waxaad yeelan doontaa oo keliya 3 talaabo oo fudud oo aad raacdo
Talaabada koowaad: ansaxinta xulashada tababarkaaga.
Talaabada labaad: waxaad heshay ictiraaf helitaanka kanaga
Tallaabada sadexaad: gal boggaaga 'Skilleos' ka dib marka aad lacagta bixiso
Xusuusnow inaad ku kaydsato sanduuqaaga email qirashadaada rasiidka, taas oo caddayn u noqon doonta haddii ay jiraan khilaafyo.
Oo halkan waa la sameeyaa !! Waxaad hadda marin u heli kartaa koorsooyinkaaga wakhti kasta, tanna dhowr taageero. Taariikh kormeer koorso ah ayaa laguu soo bandhigi doonaa si aad u aragto horumarkaaga. Koorsooyinka lama soo dejisan karo. Kaddib markii aad koorsada qaadatay, waxaad haysataa ikhtiyaar ah inaad ku qiimeyso ama aad uga tagto faallo u noqon doonta hage loogu talagalay ardayda kale. Waxaad kaloo isku dayi kartaa laba ama saddex koorso oo bilaash ah. Laakiin si looga faa'iideysto shaqadan, waa inaad marka hore isdiiwaangalisaa.
Skilleos wuxuu ku siinayaa shahaado dhamaadka kooraskaaga
Shahaado ayaa lagu siinayaa dhamaadka kooras kasta si aad ugu caddeyso dhamaadka tababarkaaga. Kaliya waa inaad raacdaa tilmaamaha lagu siiyay si aad u hesho dibloomaada.
Waxyaabaha kala duwan ee laga helo Skilleos
Diiwaangelin kasta oo ka jirta Skilleos waa bilaash, hase yeeshe waxaad kala dooraneysaa 2 dalab:
Si aad marin ugu hesho koorsooyinka ku yaal goobta loo yaqaan 'Skilleos platform', waxaad dooran kartaa midkood inaad qaadato bil kasta rukhsad la'aan ballanqaad kaas oo ku kacaya 19,90 bishiiba siinta helitaanka dhammaan koorsooyinka 24 saacadood maalintii iyo 24 maalmood usbuucii, ama waxaad doorataa koorsooyinka u iibso si shaqsi ah. Qiimaha kiiskan wuu kala duwanaan doonaa iyadoo kuxiran koorsada la doortay.
Waxaad xorriyaddaada buuxda ku haysataa diiwaangelintaada billaha ah, iyadoo ay suuragal tahay inaad joojiso ama dib u bilowdo rukhsaddaada haddii aad rabto. Haddii aad rabto inaad joojiso ama aad dib u bilowdo rukumadaada, waa inaad tagtaa qaybta rukummadayda ee ku taal is-weydaarsigaaga Skilleos. Haddii aad doorato ikhtiyaariga is-qoritaanka bishii, waxaad marin u heli doontaa dhammaan cutubyada dhammaan koorsooyinka waqti kasta.
Xulashada billaha ah ayaa loo qaybiyaa afar dalab oo kala duwan
Xulashada isdiiwaangalinta billaha ah ee .19,92 3 oo siineysa helitaanka waxyaabo aan xadidneyn, ikhtiyaarka 49 bilood ah ee cription 10,7 oo laga dhimayo .89 30,4 waa suurtagal in la siiyo qof kale, ikhtiyaarka rukunka sanadlaha ah € 169 oo laga dhimay € 70,8. Waxa kale oo aad u soo bandhigi kartaa dhinac saddexaad iyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee sanadlaha ah oo ku kacaya € XNUMX oo leh discount XNUMX dhimis. Waxaad sidoo kale siin kartaa qaacidadan qof kale.
NB Waxaa muhiim ah in la ogaado in mudada lagu jiro xannibaadda, baraha ayaa u bilaash dhammaan ardayda iyo bartayaasha. Tani waa wax laga naxo oo ay u yihiin dhammaan shaqaalaha iyo shaqaalaha raba in ay is casriyeeyaan oo ay bartaan xirfado kale oo muhiim ah oo u oggolaanaya iyaga in ay si xirfad leh ugu koraan.
Waa kor u qaadis dhab ah oo ah qaabka loo yaqaan 'Skilleos madal', oo ah hogaamiyaha koorsooyinka Faransiiska ee tooska ah ee Faransiisku siinayo dhammaan kuwa doonaya inay waxbadan ka bartaan wakhtigan iyaga oo ku tababaranaya guriga.
Faa'iidooyinka iyo awoodaha Skilleos
Ugu dambeyntiina, haddii Skilleos ay tahay barxadda koowaad ee loogu talagalay koorsooyinka xiisaha leh ee Faransiiska, waa sababta oo ah waxay leedahay:
tayada sare ee fiidiyowyada iyo kala duwanaanta iyo tirada xadidan ee mowduucyada iyo maaddooyinka la baray. Da 'da' walba waxay helaan koontooda
macalimiin aqoon iyo karti leh oo si adag loo xushay.
Meel furan ayaa marwalba loo heli karaa dhammaan bartayaasha
dalabyo iyo dallacsiin ku habboon baahiyahaaga.
Saamiga qiimayaasha tayada leh wuxuu ku habboon yahay filashooyinka isticmaaleyaasha.
Celcelis ahaan 80 bartayaal ayaa isdiiwaangeliyay oo ku qancay tayada waxa ku jira iyo tayada adeegga ee lagu helo madasha waa 000%. Tani celcelis ahaan ka sareysa ayaa lagu caddeeyaa xaqiiqada ah in ardaydani ay doorbidaan casharrada qaab muuqaal ah halka ay ka cashar bixin lahaayeen waraaqaha. Si fudud ayey wax ugu bartaan qaabkan. Waxay u arkaan inay tahay mid firfircoon oo firfircoon. Ardaydu way ku qabatimaan oo waxay cunaan aqoonta iyagoo aan waligood dooneyn inay joojiyaan.
Faa'iido darrooyinka iyo dhibco daciifka ah ee Skilleos
Waxyaabaha diidmada ah ee aad sida ugu macquulsan ugu eedeyn karto Skilleos ayaa ah: Ma jiro shaqo bina aadamnimo oo qumman oo kooxda Skilleos ayaa saxday. Tani waa sababta aan u ogaan karno inay si joogto ah u hagaajinayaan howlaha barxadda. Waxaan sidoo kale xusi karnaa nidaamka xulashada adag ee macallimiinta iyo macallimiinta. Qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa inay ku niyad jabaan dhererka iyo dhibaatada habka qorista. Buug-yaraha koorsada kooban ee soo-kordhay marka la barbar dhigo barnaamijyada waaweyn sida Udemy.
Baro inaad ku madadaasho SKILLEOS, e-learning madal May 12th, 2020Tranquillus
horeCoronavirus iyo waxqabadka qayb ahaan, 84% mushaharkaaga saafiga ah ayaa lagu siin doonaa adiga.
socdaWarbixinta nashaadaadka, waa aaladda lagama maarmaanka u ah faafinta macluumaadkaaga.